Fake News oo sababay joojinta been abuurka koowda abriil - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Fake News oo sababay joojinta been abuurka koowda abriil
La daabacay fredag 31 mars 2017 kl 16.53
War-geeysyo ka gaabsaey caadada been-abuurka ee koowda bisha abriil. sawir: Roald, Berit
Sannad walba, koowda abriil ayaa war-geeysyada lagu soo daabacaa warar been-abuur ah, hase yeeshee ey saxaafado badani iminka joojiyeen beentii koowda abriil. Tallaabooyinkaasina oo ka dambeeyyey sidii looga dheeraan lahaa wararka fake news-ka ah – warar aan dhab ahayn.
Fahamka weerta "fake news - warar aan dhab aheyn”, ayaa aad u soo caan baxay wixii ka dambeeyay doorashadii madax-ti-nimo ee dalka Mareeykanka. Waa warar been abuur ah ee ku saabsan ula kac dano gaar ah laga leeyahey kuwaasina oo lagu faafiyo shaashadda internet-ka. Mararka qaarkood waxaa ka dambeeya dano siyaasadeed.
- Wakhtiga iminka lagu jiro aad ayay u sahlan tahay in warar been abuur ah ey faafaan. Waxaannu u taagan-nahey wararka xaqiiqda ah ee la soo hubiyey. Mana doonayo inaan la mid noqdo dadyoowga ku howlan wararka xaqiiqda ka fog. Marka waannu ka fogaaney, sida uu sheegay Magnus Karlsson tifaf-tiraha war-geeyska Smålandsposten.
Horay ayaa loogu guuleeystey
Miyaanay kula ahayn iney akhristeyaashu kala saari karaan warka dhabta ah iyo fake news?
- waxaan qabaa in badankood akhristeyaashu wey kala saari karaan farqiga u dhexeeya wararka runta ah iyo beenta. Dhanka kale waxaa jira warar been abuur ah ee la soo daabaco oo dadkuna u qaataan sidii xaqiiq oo kale, sida uu sheegay Magnus Karlsson.
Sidoo kale waxaa iyaguna ka tanaasulay iney fake news qoraan war-geeysyada Dalarnas Tidningar, Hallpressen iyo Västerbottens-Kuriren.
- Waxaa jira warar been-abuur ah oo war-geeysku daabacay oo lagu guuleeystey, tusaale ahaan nin afar carruur ah aabbe u noqday habeen uu dibadda caweeys ugu maqnaa. Laakiin hadda waxaannu dareeney in laga tanaasulo iyada oo laga amba-qaadeyo doodaha ballaaran ee ka dhashey aaminaadda saxaafadda wixii ka dambeeyey dooddii la xiriirtay fake news, sida uu sheegay Ingvar Näslund, ahna tifaf-tiraha war-geeyska Västerbottens-Kuriren.
War-geeysyada ayaa sannadka wax ka qori doona been-abuurradii maalinta koowda abriil oo ey horay ugu guuleeysteen, sida uu sheegay.
Fikir ka duwan
Dhanka kale war-geeysyada qaar ayaa ku dheggan caadada been-abuurka koowda abriil.
- Aad waxaa muhiim u ah in dib laga macneeyo been-abuurka si aanu bannaanka isaga oolin oo aan khalad looga fahmin., sida ay sheegtay Anna Gullberg, ahna tifaf-tiraha war-geeyska Gefle Dagblad.
Tifaf-tiraha war-geeyska Sydsvenskan, Pia Rehnquist ayaa sheegtay inay kala duwan yihiin been-abuurka iyo wararka fake news.
- Waxay ila tahay inay aad u yar tahay halista ka iman karta aamin-bax nalaka qaado kolka laga hadleyo been-abuurka koowda abriil, sida ay sheegtay.
Dalka Sweden ayaa laga ogsoonaa been-abuurka koowda bisha abriil laga soo bilaabo bartamihii qarnigii 16-aad, sida laga daalacan karo qaamuuska Nationalencyklopedin.
Been-abuurradii kowda abriil ee ugu caansanaa taariikhda:
1950 war-geeyska Göteborgs-Posten ayaa qoray in jasiiradda Öland ay soo go’day oo ku soo xirantay xeebta Sweden.
1962 – xilligaasi oo TV-gu ahaa caddaan madow ayaa idaacadda SVT laga baahiyay in haddii sharabaaddo midab leh lagu dado tv-ga lagu daawan karo sidiiyoo uu midab yahay.
1980 - War-geeyska Dagens Nyheter ayaa qoray in xilligii saacadda kuleeylaha la bedeley iyada oo aan la baahin. Hase-yeeshee la galey xilligii kuleeylaha shan maalmood dabadeed, markii ugu horreeysay laga soo bilaabo 1916.
2005 – ayay idaacadda la iska daawado ee TV4 baahisay been abuur ah in laga xaday cajaladihii filimkii musalsalka ahaa ee ”Lost”, sidaa daraadeedna aan la daawan karin.
2008 – War-geeyska Dagens Nyheter wuxuu daabacay in la muraayadeeyn doono garoonka Hammarbybacken ee magaalada Stockholm gebi ahaan.